पहिलो र दोस्रो डोज फरक फरक भ्याक्सिन लगाए के हुन्छ ?
नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउने क्रम बढ्दो छ । तर, यसअघि भारतबाट आएको कोभिशिल्ड वा कोभ्याक्सिन लगाएका मानिसहरुले अहिले दोस्रो डोज लगाउन पाएका छैनन् ।
त्यसैले नेपालमा पनि प्रश्न उठेको छ, पहिले अर्कै भ्याक्सिन लगाएकाहरुले दोस्रो पटक अर्को भ्याक्सिन लगाएमा के हुन्छ ?
भारतमा पनि अहिले यही अवस्था रहेको छ । त्यहाँ पनि कोभिशिल्ड र कोभ्याक्सिनको सहज रुपमा उपलब्ध छैन । भ्याक्सिन सहज रुपमा उपलब्ध नभएपछि त्यहाँ केहीले पहिले कोभिशिल्ड लगाए पनि दोस्रोपटक कोभ्याक्सिन लगाएका छन् । अनि पहिले कोभ्याक्सिन लगाएकाले पनि पछि कोभिशिल्ड लगाएका छन् ।
फरक फरक भ्याक्सिन लगाएपछि त्यहाँ निकै ठूलो अन्योल देखिएको छ ।
तर, अब भारत सरकारले यस्तो अवस्था आत्तिनु नहुने बताएको छ । र, यसलाई पूर्णरुपमा सुरक्षित हुने पनि भनिएको छ ।
भारतको नीति आयोगको स्वास्थ्य समितिका सदस्य डा. भिके पलले फरक फरक भ्याक्सिन लगाए पनि कोही आत्तिनु नहुने बताएका छन् । बरु उनले त भारत सरकारले नै अब यसरी फरक फरक भ्याक्सिन मिलाएर लगाउने योजना बनाउन थालेको पनि बताएका छन् ।
‘यो पूर्णरुपमा सुरक्षित हुन्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘प्रोटोकलअनुसार एउटै भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने हो तर यसमा आत्तिनु पर्ने केही छैन ।’
प्रकाशित मिति : जेठ १३, २०७८ बिहीबार १८:३८:९,